ujyaalo khabar - Page3of 20 - नया युगको नया समाचार उज्यालो खबर DAILY NEWS
एक वर्षको उमेरमा नै बालिका गर्भवती : आश्चर्यजनक, बाबुआमा आत्तिए ; डाक्टर समेत चकित परे ! (भिडियो सहित)
यो संसारमा गर्भवती मात्र महिला, स्त्री जातिका हुन्छन्, यसमा कुनै दुई मत नै छैन । महिला गर्भवती हुनु भनेको एउटा सामान्य कुरा हो । तर यो खबर यति आश्चर्यजनक छ कि सायद तपाईलाई विश्वास गर्न र्न गाह्रो हुन्छ ।
यस्तै चीनमा एक बालिका एक वर्षको उमेरमा नै गर्भवती भएकि छिन् । ती बालिकाको पेट दिनप्रति दिन नै फुलिरहेको थियो । यसरी दिनप्रति दिन पेट फुलिरहदा उसको बाबुआमा आत्तिएर उसलाई अस्पतालमा लगेका थिए । ती बालिकाको स्क्यान गराउदा डाक्टरका साथै उसको बाबु आमा समेत दङ्ग परेका थिए ।
वास्तवमा बालिका गर्भवती थिइन् तर उसको गर्भमा अरु कोही नभएर उसको जुडुवा भाई हुर्किरहेको थियो । डाक्टरका अनुसार ती बालिकाको आमाको गर्भमा भ्रूण विकास भएका कारण आफ्नै बहिनीको गर्भमा भाई हुर्किरहेको हो ।
यो संसार कै निकै दुर्लभ घटना भएको डाक्टरहरुले बताएका छन् । डाक्टहरुले सर्जरी गरी त्यस भ्रूणलाई बाहिर निकालेको छ । साथै ती बालिका पनि सुरक्षित छिन् । ( एजेन्सीको सहयोगमा )
बहिनि संग बिहे गर्नुहोस सुनको कार उपहार पाउनुहोस् ..
कोरियाका तानशाह किम जोंग बिभिन्न कारणले गर्दा चर्चामा रहन्छन् । अहिले पनि उनी चर्चामा नै छन् । उनी अहिले आफ्नी वहिनीको लागि बेहुलाको खोजिमा छन् ।
तर उनले बेहुलाका लागि बिभिन्न शर्त राखेका छन् । त्यसमध्येको मुख्य शर्त भनेको बेहुलाको आज भन्दा पहिला कोहिसँग पनि अफेयर चलेको हुनु हुँदैन ।
उनले हुनेवाला ज्वाईलाई सुनले चम्किएको कार उपहारमा दिने बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यामका अनुसार उत्तर कोरियाका राष्ट्रपति किम जोंगले आफ्नी बहिनी किम यो जोंग को विवाह गर्ने फैसला गरेका हुन् ।
किमका अनुसार हुने वाला बेहुला उनको शर्तमा खरो हुनुपर्नेछ । साथै बेहुलाको हाइट ५ फिट १० इन्च भन्दा अग्लो हुनुपर्नेछ । बेहुलाको यो भन्दा अगाडि कसैसँग पनि अफेयर चलेको हुनु हुँदैन।
साथै बेहुलाको तौल ७५ किलोग्रामसम्म हुनु पर्दछ । बेहुलाको सिक्स प्याक एब्स हुनुपर्दछ । किम जोंग हुनेवाला ज्वाईलाई एउटा सुनको कारका साथै १ करोड ६० लाख रुपैयाँ दिनेछन् ।
अहिले उनकी बहिनीलाई बेहुला खोज्न उत्तर केरियाका अधिकारीहरु लागि परेका छन् । राष्ट्रपति जोंगले बहिनीका लागि बेहुला उनको टक्करको हुनुपर्ने बताएका हुन् । किनभने उनले पछि गएर राजनीति सम्हाल्नु पनि पर्न सक्दछ ।
५५ फिट लामो कपाल भएकी युवती, नुहाउनलाई ६ बोतल स्याम्पु लाग्ने
महिलाको कपाललाई सुन्दरताको प्रतिक मानिन्छ । एक महिलाको कपाल अत्यधिक लामो भएकाले विश्वकिर्तिमान राख्न सफल भएकी छिन् । अमेरिकाकी आशा मन्डेलाको कपाल ५५ फिट लामो र तौल २० ग्राम रहेको छ । यो कपाल धुनको लागी ६ बोतल स्याम्पु खर्च हुन्छ । कपाल सुक्नलाई पूरा एकदिन लाग्ने गरेको जनाइएको छ ।
पहिला लामो कपालको कारण उनीसँग कोही पनि विवाह गर्न चाहँदैनथिए । हाल हेयर ड्रेसर इमानुएलसँग उनको विवाह भएको छ ।
उनलाई लामो र धेरै कपालले पीठ र गर्दनमा ग्राहो भइरहेकोले डाक्टरले काट्ने सल्लाह दिएपनि उनी मानिनन् । कपालले नै आफ्नो पहिचान र कमाई दिएकाले काट्न नमानेको जनाइएको छ । उनले आशा हेयर प्रोडक्ट्स र एसेसरीजको विज्ञापनमा पनि काम गरेकी छिन् । यसरी उनले लाखौ डलर कमाउदै आएकी छिन् ।
थप राेचक जानकारि
आधा भाग मानिस र आधा जनावर, मरेर पनि फेरी जिउँदो भए
यो विश्वमा यस्तो पनि हुन सक्छ र कोही मरेर पनि फेरी बाँचेको । सुन्दा अचम्म लाग्छ तर यो वास्तविकता नै हो यो । अफ्रिकाको पुर्वि क्षेत्रमा अनौठौ किसिमको बच्चाको जन्म भएको थियो । अफ्रिकामा एक भेडाले अजीबको बच्चालाई जन्म दिएको थियो । यो बच्चा आधा मानिस र आधा जनावर जस्तो थियो । हेर्दा यो बच्चा मानिस जस्तो देखेर सबै मानिस छक्क परेका थिए ।
उक्त बच्चा हेर्नको लागि मानिसहरु टाढा टाढाबाट पनि आउने गरेका थिए । त्यो बच्चा जन्मेको केही समयमा नै मरेको थियो । तर, केही समयपछि फेरि जिउँदो भएको थियो । मरिसकेको बच्चा जिउँदो देखेर सबैजना अचम्ममा परेका थिए ।
यो घटना भएको सुचना पश्चात इस्टर्न केप डिपार्टमेन्टको विशेषज्ञको टोलीले गर्भवती अवस्थामा भेडालाई रिफ्ट वैलि ज्वरोबाट ग्रसित भएको लामखुट्टले टोकको हुँदा यस्तो विचित्रको बच्चा जन्मिएको जनाएको छ ।
विशेषज्ञको टिमको अनुसार भेडाको यो बच्चा आधा मानिस जस्तो र आधा जनावर देखिए पनि मानिसको कुनै हिस्सा नभएको पनि बताएका छन् ।
अनुहारमा दाग आएर हैरान हुनुहुन्छ ? दाग हटाउने सारै सजिलो घरेलु तरिका
अनुहारमा आउने डण्डिफोर, दाग धब्बाका कारण नचाहादा नचाहादै अनुहारको सुन्दरता बिग्रन सक्छ। अनुहार सुन्दर बनाउने जो कोहीको चाहना हुन्छ। यदी अनुहारमा आउने दाग धब्बा तथा डण्डिफोर हटाएर अनुहारमा सुन्दरता देख्न चाहनुहुन्छ भने यी टिप्सको प्रयोग गर्नुहोस्। जसले गर्दा तपाईको बिग्रीएको सुन्दरता फिर्ता पाउन सक्नुहुनछ।
यदी अनुहारमा आउने दाग धब्बा तथा डण्डिफोर हटाएर अनुहारमा सुन्दरता देख्न चाहनुहुन्छ भने यी ६ टिप्सको प्रयोग गर्नुहोस्। जसले गर्दा पुरै अनुहारको दाग मेटाउँछ र अनुहारमा चमक पैदा गर्छ ।
राती अबेर सम्म मोबाइलको प्रयोग गर्दा हुन सक्छन यस्ता हानिहरु । जानिराखौ
घरमै बसेर यसरी गोरो र चम्किलो बनाउन सकिन्छ अनुहार,पार्लर धाउनु पर्दैन . .
एक चम्चा मह अनुहारमा लगाउने (यसमा ४–५ थोपा कागतीको रस मिलाउन सकिन्छ ।) १५ मिनेटमा अनुहार पखाल्दा चमक आउँछ।
यौ’ न सम्प’र्क गर्दा गर्दै पलङ भाँचिएपछि फर्निचर कम्पनीवि रु द्ध मु’ द्दा /
सारमा दुनियाँलाई चकित पार्ने अनौठो किसिमका घ’ट ना घटिरहेका हुन्छन् । घ’ट ना सुन्दा हाँसोमा परिणत गराउने र घ’ट ना विश्वास नै गर्न नखालका समेत हुन्छन् ।
दक्षिण पूर्वी ईङ्गल्याण्डको वर्कशायर शहरमा एक नव दाम्पत्य जोडी जोन मार्शल र क्लेयरले यस्तै अनौठो घ ट ना सामना गरेका छन् । उनीहरुले यौ* न सम्बन्ध राख्ने क्रममा पलङ नै भाँ चि एको छ । पलङ भाँचिए पश्चात श्रीमती क्लेयर भुईमा पछारिइन् र उनको शरीरमा ग म्भीर चोट लागि प्या रालाइ सिस भएको थियो ।
यो घट्ना पश्चात क्लेयरको मेरुदण्डको हड्डीमा ग म्भीर चो ट लागेको छ भने घ ट्नापछि श्रीमती क्लेयरले बेड बनाउँने कम्पनीवि रु द्ध अदालतमा मु* द्दा समेत हालेकी छिन् । उनीहरुले केही दिन अगाडी मात्र यो पलङ किनिएको भनेर लण्डन हाइकोर्टमा मु’ द्दा सुनुवाईका क्रममा बताएका थिए ।
श्रीमतीको आ रो प यस्तो छ कि, जुन दु र्घ’ट ना भएको हो बेडमा भएको ख रा बीका का र ण भएको हो र बेड पनि केही हप्ता पहिले मात्र किनेको भनेर दावी गरिन् । बेडमा केही पनि खराबी नभएको भनेर बेड कम्पनीले घरमा डेलिभरी हुँदा दावी गरेको थियो, तर बेड पहिला नै बिग्रिएको रहेछ भनेर महिलाले दा वी गरिरहेकी छिन् ।